Apple Hires Bernadette Simpao, Ọkachamara Mmekọrịta Ọha | Esi m mac
Apple goro Bernadette Simpao, onye ọkachamara n'ihe gbasara ọhaneze
Onye na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na telivishọn bụ Bernadette Simpao, bụ onye rụburu ọrụ n'ụlọ ọrụ ndị dị mkpa dịka AMC na Viacom, ka Apple goro ka ọ hazie ọrụ n'ime ngalaba na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze iji melite arụmọrụ. metụtara Apple Apple ọhụrụ. N'ụzọ dị otu a, ị ga - enyere aka melite ihe ngosi onyonyo, ihe nkiri, ngwa, akwụkwọ na pọdkastị nke Apple na - enye ndị ọrụ nọ n'ụlọ ahịa iTunes.
Dabere na ozi sitere na Variety, Simpao nọrọ afọ iri nke ọrụ Viacom ya ọrụ nkwukọrịta dị iche iche, gụnyere nke Onye isi Nduzi nke Nkwukọrịta maka Viacom International Media Networks, tupu ya abanye na AMC, netwọkụ ama ama maka hits dị ka "Onye Na-aga Ije Nwụrụ Anwụ", usoro nke megoro ọtụtụ nde ndị na-eso ụzọ.
Ọrụ ya n'oge ọ dị ka njikwa na Viacom gụnyere ọrụ na njikwa mgbasa ozi ezubere iche ndị na-azụ ahịa ọbụna na mpụga United States, gụnyere netwọkụ dịka MTV, Nickelodeon, BET, na Comedy Central. Site na 2007 rue 2009, o jere ozi dị ka Onye Nkwukọrịta na Mmekọrịta Ọha na Ọha nke BET Networks, dị ka profaịlụ LinkedIn ya.
Jim Maiella, osote onye isi oche nke nkwukọrịta na AMC kwukwara banyere ọrụ Simpao na ụlọ ọrụ ahụ:
Bernadette bụ onye nkwusa nwere nghọta, onye a na-agwakọta talent ya bara uru mgbe ọ bịara n'ịgwa ndị ahịa ahụ okwu gbasara ndị ahịa ha. Ọ bụ nnukwu mgbakwunye na ndị ọrụ nkwukọrịta na-eme ma AMC na IFC Films ihe ha bụ, amakwaara m na ụdị abụọ a ga-erite uru na echiche na echiche gị maka akụkọ ndị na-eme ngwa ahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple goro Bernadette Simpao, onye ọkachamara n'ihe gbasara ọhaneze
Applelọ Ahịa Apple ga-ebuli njikwa nke nhọpụta na Ogwe Genius
Chekwaa foto niile ịchọrọ na iCloud n’akwụghị ụgwọ maka ohere